Yehowa Asomfo Agyapade | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Eyi ne Yehowa asomfo agyapade.”—YES. 54:17.
Dɛn na Onyankopɔn ayɛ de akora Bible so abesi nnɛ?
Dɛn na Yehowa ayɛ de akora ne din so ama ne nkurɔfo?
Dɛn na Onyankopɔn ayɛ de akora nokware no so ama yɛn?
1. Ade titiriw bɛn na Yehowa akora so ama adesamma?
YEHOWA ne “Onyankopɔn teasefo a ɔte hɔ daa,” na wakora n’asɛm so ama yɛn na yɛatumi atena ase daa. N’asɛm nsesa da. Bible ankasa ka sɛ ‘Yehowa asɛm wɔ hɔ daa.’ (1 Pet. 1:23-25) Yɛda Yehowa ase sɛ wakora n’Asɛm so wɔ Bible mu ama yɛn.
2. Dɛn na Onyankopɔn akora so wɔ Bible mu ama ne nkurɔfo?
2 Onyankopɔn apaw din ama ne ho, na wakora so wɔ Bible mu ama ne nkurɔfo. Bere a Bible reka “ɔsoro ne asase mfiase ho nsɛm” no, ɛbɔɔ “Yehowa Nyankopɔn” din. Eyi ne bere a edi kan a Bible bɔ saa din no. (Gen. 2:4) Onyankopɔn din pue mpɛn pii wɔ Mmara Nsɛm Du a ɛwɔ abopon no so no mu. Ɛho nhwɛso ni: Onyankopɔn fii mmara a edi kan no ase sɛ: “Mene Yehowa wo Nyankopɔn.” (Ex. 20:1-17) Ɔbonsam afa akwannuasa nyinaa so sɛ ɔbɛsɛe Bible ma Onyankopɔn din ayera, nanso Awurade Tumfoɔ Yehowa amma kwan. Wakora ne din so abesi nnɛ.—Dw. 73:28.
3. Dɛn bio na Onyankopɔn akora so wɔ Bible mu ama yɛn?
3 Afei nso Yehowa akora nokware no so wɔ Bible mu. Atoro som akyinkyim nokware no wɔ wiase nyinaa, enti ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani gye sɛ Onyankopɔn ama ne nokware hann no ahyerɛn ama yɛn. (Monkenkan Dwom 43:3, 4.) Bere a wiase no de wɔn ti repempem wɔ sum mu no, yɛn de, Onyankopɔn ama yɛn hann.—1 Yoh. 1:6, 7.
AGYAPADE A ƐSƐ SƐ YƐMA YƐN ANI SƆ
4, 5. Hokwan titiriw bɛn na yenyae wɔ afe 1931 mu?
4 Mmusua pii taa gyaw wɔn amammerɛ, wɔn su, ne wɔn amanne ma nkyirimma. Sɛ yɛbɛka a, eyinom yɛ abusua no “agyapade.” Kristofo nso wɔ agyapade bi a Yehowa de ama yɛn. Yehowa aboa yɛn ma yɛate Bible no ase, na yɛahu n’atirimpɔw. Afei nso wabue yɛn ani ama yɛahu no yiye. Agyapade yi ama yɛanya hokwan titiriw bi nso.
Yɛn ani gyei sɛ yenyaa edin Yehowa Adansefo wɔ yɛn nhyiam ase wɔ 1931 mu
5 Saa hokwan titiriw no bɛkaa yɛn agyapade ho wɔ nhyiam bi ase wɔ Columbus, Ohio, U.S.A., wɔ afe 1931 mu. Anuanom huu “JW” wɔ krataa a wɔahyehyɛ nhyiam no dwumadi wɔ so no so. Onuawa bi kae sɛ bere a anuanom huu “JW” no, obiara kaa nea osusuw sɛ ɛkyerɛ. Saa bere no na wɔfrɛ yɛn Bible Asuafo. Nanso Kwasida July 26, 1931 no, yɛn nyinaa yɛɛ mpaemuka faa edin Yehowa Adansefo (Jehovah’s Witnesses wɔ Borɔfo mu). Yɛn ani gyei paa sɛ yenyaa edin a efi Bible mu. (Monkenkan Yesaia 43:12.) Onua biako kae sɛ: “Anuanom bɔɔ wɔn nsam maa ɛhɔ wosowee. Me werɛ remfi saa da no da.” Wiase no mpɛ saa din no, nanso Onyankopɔn de edin titiriw yi adom yɛn bɛboro mfe 80 ni. Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani gye sɛ yɛyɛ Yehowa Adansefo!
6. Dɛn bio na yebu no sɛ yɛn agyapade?
6 Yɛwɔ agyapade foforo nso. Eyi ne Yehowa asomfo a wɔtenaa ase tete no ho nsɛm a wɔakora so ama yɛn. Wɔn mu bi ne Abraham, Isak, ne Yakob. Yebetumi aka sɛ na saa mmarima yi ne wɔn mmusua taa susuw Yehowa ho, na eyi boaa wɔn ma wɔyɛɛ nea ɛsɔ n’ani. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ bere a Potifar yere pɛe sɛ ɔne Yosef da no, Yosef kaa no pen sɛ ɔrentumi ‘nyɛ bɔne a ɛte saa ntia Onyankopɔn.’ (Gen. 39:7-9) Kristofo bere so nso ɛ? Yetumi hu sɛ wɔde nea wonim fa Onyankopɔn ho gyaw nkyirimma. Ɛho nhwɛso ne sɛnea wodi Awurade Anwummeduan no. Paulo kae sɛ nea onya fii Awurade hɔ no na ɔde maa Kristofo asafo no. (1 Kor. 11:2, 23) Ɛnnɛ, yɛwɔ nneɛma pii wɔ Bible mu a ebetumi aboa yɛn ma yɛasom Onyankopɔn wɔ “honhom ne nokware mu.” (Monkenkan Yohane 4:23, 24.) Wɔkyerɛw Bible maa adesamma nyinaa nanso Yehowa asomfo de, yebu no sɛ akyɛde a ɛsom bo paa.
7. Bɔhyɛ bɛn na ɛma yehu sɛ yɛwɔ agyapade kɛse?
7 Ɛnnɛ nso yenya nsɛm bebree wɔ yɛn nhoma mu a edi adanse sɛ ‘Yehowa wɔ yɛn afã.’ (Dw. 118:7) Enti sɛ yehyia ɔsɔretia mpo a, yɛmmɔ hu. Eyi ka agyapade a yɛwɔ no ho. Ade biako a ɛboa ma yehu saa agyapade titiriw yi ne bɔhyɛ a ɛwɔ Yesaia 54:17 yi: “‘Akode biara a wɔbɛyɛ de aba wo so no renyɛ yiye, na tɛkrɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo wɔ asɛnnii mu no, wubebu no fɔ. Eyi ne Yehowa asomfo agyapade, na wɔn trenee fi me,’ Yehowa asɛm ni.” Satan akode biara nni hɔ a ebetumi adi yɛn awu afebɔɔ.
8. Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi ne nea edi hɔ no mu?
8 Satan ayɛ biara sɛ ɔbɛsɛe Bible, na ɔmpɛ sɛ nkurɔfo behu Yehowa din no; ne yam a anka nokware no ayera. Nanso nea wayɛ nyinaa ankosi aga; Yehowa amma no kwan. Adesua yi ne nea edi hɔ mu no, yɛbɛhwɛ nneɛma abiɛsa: (1) sɛnea Onyankopɔn abɔ Bible ho ban; (2) nea Yehowa ayɛ de akora ne din so; ne (3) nea yɛn soro Agya no ayɛ ma yɛahu nokware no nnɛ.
YEHOWA ABƆ BIBLE HO BAN
9-11. Dɛn na Bible afa mu a ɛda so wɔ hɔ?
9 Atamfo afa akwannuasa nyinaa so sɛ wɔbɛsɛe Bible, nanso Yehowa abɔ ho ban. Nhoma bi ka sɛ afe 1229 no, Katolek Asɔre no yɛɛ nhyiam bi wɔ Toulouse, na wɔbarae sɛ ɛnsɛ sɛ ɔmanfo kenkan Bible a wɔakyerɛ ase kɔ kasa horow mu. Wɔhyɛɛ saa mmara no efisɛ na Asɔre no ne wɔn a wɔkasa tia asɔre no nkyerɛkyerɛ redi asi. Afe 1234 no, Asɔre no yɛɛ nhyiam foforo wɔ Tarragona, Spain. Ɛhɔ nso wɔhyɛɛ mmara koro no ara. Afe 1559 mu no, Paul a ɔto so anan no hyɛɛ mmara bi a ɔne Katolek Asɔre no ti ansusuw ho. Ɔkae sɛ ɛnsɛ sɛ obiara tintim Bible anaa onya bi to ne ho. Bere a wɔhyɛɛ saa mmara no, Katolek Asɔre no nkorabata bi tiaa mu. Eyi ne bere a edi kan a wɔyɛɛ saa.—Enciclopedia Cattolica.
10 Nea Bible afa mu nyinaa akyi no, ɛda so ara wɔ hɔ. Afe 1382 mu no, John Wycliffe ne n’aboafo kyerɛɛ Bible ase kɔɔ Borɔfo kasa mu. Eyi ne nea edi kan a wɔkyerɛɛ ase kɔɔ Borɔfo kasa mu. William Tyndale nso kyerɛɛ Bible ase kɔɔ Borɔfo kasa mu. Eyi nti wokum no afe 1536 mu. Wɔkyekyeree no bɔɔ dua ho, na ɔteɛɛm sɛ: “Awurade, bue England hene ani.” Afei wokum no hyew n’amu.
11 Afe 1535 no, Miles Coverdale nso kyerɛɛ Bible ase kɔɔ Borɔfo kasa mu. Bere a ɔrekyerɛ ase no, ɔhwɛɛ “Apam Foforo” a Tyndale kyerɛɛ ase no so de yɛɛ ne de. Bere a ɔrekyerɛ “Apam Dedaw” no ase nso, ɔhwɛɛ Tyndale de no so de kyerɛɛ Genesis kosi Beresosɛm ase. Ɔkyerɛɛ Bible no fã bi nso ase fii Latin mu. Bio nso ɔhwɛɛ Martin Luther Bible a ɛwɔ German kasa mu yɛɛ ɔfã foforo. Ɛnnɛ, yɛwɔ Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase no. Yɛn ani gye ho efisɛ ɛyɛ Bible a edi mũ na ntease wom, na ɛyɛ mmerɛw sɛ yɛde bɛyɛ adwuma wɔ asɛnka mu. Satan oo, nnipa oo, obiara ntumi nsɛe Yehowa Asɛm no da.
YEHOWA AMMA NE DIN ANYERA
Onyankopɔn Asɛm nti, mmarima te sɛ Tyndale ne afoforo de wɔn nkwa twaa so
12. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no aboa ma wɔakora Onyankopɔn din so?
12 Yehowa Nyankopɔn amma ne din anyera amfi Bible mu. Wiase Foforo Nkyerɛase no aboa ma wɔakora Onyankopɔn din so wɔ Kyerɛwnsɛm no mu. Wɔn a wɔkyerɛɛ ase no kae wɔ nnianim asɛm no mu sɛ: “Ade a ɛda nsow kɛse wɔ saa nkyerɛase yi ho ne sɛ, ɛde Onyankopɔn din ahyehyɛ faako a ɛsɛ sɛ ɛhyɛ wɔ Bible kyerɛw nsɛm no mu. Nea wɔayɛ ne sɛ wɔde sɛnea wɔbɔ edin no wɔ Twi mu a ɛne ‘Yehowa’ no ahyehyɛ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu mpɛn 6,973 ne mpɛn 237 wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu.” Seesei Wiase Foforo Nkyerɛase no nyinaa anaa ne fã bi wɔ kasa bɛboro 116 mu, na wɔatintim mfuamfua bɛboro 178,545,862.
13. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ efi bere a Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, nkurɔfo nim ne din?
13 Efi bere a Onyankopɔn bɔɔ nipa too asase so nyinaa, wama nkurɔfo ahu ne din. Na Adam ne Hawa nim edin no, na adanse wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ na wonim sɛnea wɔbɔ din no. Noa nso bɔɔ Onyankopɔn din. Bere a Ham buu n’agya Noa animtiaa wɔ Nsuyiri no akyi no, Noa kae sɛ: “Nhyira nka Yehowa, Sem Nyankopɔn, na [Ham ba] Kanaan nyɛ n’akoa.” (Gen. 4:1; 9:26) Onyankopɔn ankasa kae sɛ: “Mene Yehowa; me din ne no. Na meremfa m’anuonyam mma obiara.” Onyankopɔn san kae sɛ: “Mene Yehowa, na obiara nni hɔ bio. Onyankopɔn bi nni hɔ ka me ho.” (Yes. 42:8; 45:5) Yehowa ama wɔakora ne din so ama nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ahu. Ɛyɛ nidi kɛse sɛ Yehowa din da yɛn so na yɛyɛ n’Adansefo! Sɛ yɛbɛka a, yɛn nyinaa teɛm ka sɛ: “Yɛn Nyankopɔn din mu na yɛbɛmoma yɛn frankaa so.”—Dw. 20:5.
14. Bible akyi no, ɛhe bio na Onyankopɔn din pue?
14 Ɛnyɛ Bible mu nkutoo na Onyankopɔn din pue. Bere bi wohuu abopon bi a wɔfrɛ no Moab Abopon wɔ Dhiban (Dibon). Sɛ wufi Po a Awu no ho de w’ani kyerɛ apuei fam a, wubetwa kilomita 21 (kwansin 13) ansa na woadu hɔ. Israel hene Omri ho asɛm wɔ abopon no so na ɛka sɛnea Moab hene Mesa tew Israel so atua. (1 Ahe. 16:28; 2 Ahe. 1:1; 3:4, 5) Nanso nea ehia yɛn kɛse ne sɛ Onyankopɔn din wɔ abopon no so. Wɔakyerɛw din no YHWH wɔ Hebri kasa mu. Bio nso wohuu nkyɛmfɛre bi a wɔakyerɛw nkrataa wɔ so wɔ Israel. Wɔfrɛ no Lakis Nkrataa, na Onyankopɔn din pue mpɛn pii wɔ so.
15. Dɛn ne Septuagint no, na dɛn nti na na saa nkyerɛase no ho hia?
15 Wɔn a wɔkyerɛɛ Bible ase tete no nso boa ma wɔkoraa Onyankopɔn din so. Bere a Yudafo kɔyɛɛ nkoa mfe 70 wɔ Babilon a wogyaa wɔn wɔ afe 537 A.Y.B. mu no, ɛnyɛ Yudafo no nyinaa na wɔsan kɔɔ wɔn kurom. Akyiri yi ebinom kɔɔ Alexandria wɔ Egypt. Saa bere no na wɔka Hela kasa wɔ aman pii so. Enti na ehia sɛ wɔkyerɛ Hebri Kyerɛwnsɛm no ase kɔ Hela kasa mu ma Yudafo no. Wowiee saa nkyerɛase no bɛboro mfe 2,000 ni. Ná wɔfrɛ nkyerɛase no Septuagint. Wɔakyerɛw Yehowa din no wɔ Hebri mu (YHWH) wɔ Septuagint no bi mu.
16. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ afe 1640 mu no, wɔde Onyankopɔn din dii dwuma wɔ nhoma bi mu?
16 Onyankopɔn din pue wɔ nhoma a edi kan a wotintim wɔ Amerika aman a na England di so no mu. Ɛyɛ Nnwom nhoma no na wɔkyerɛɛ ase fii Hebri kasa mu kɔɔ Borɔfo kasa mu. Wɔfrɛ nhoma no “Bay Psalm Book” (Bay Nnwom Nhoma), na afe 1640 na wotintim nea edi kan. Baabi biako a edin no pue ne Dwom 1:1, 2. Ɛhɔ ka sɛ onipa a wɔahyira no ntie abɔnefo afotu, “mmom n’ani gye Iehovah mmara ho.” Sɛ wopɛ sɛ wuhu Onyankopɔn din ho nsɛm pii a, hwɛ The Divine Name That Will Endure Forever nhoma no.
YEHOWA AKORA NOKWARE NO SO
17, 18. (a) Dɛn ne “nokware”? (b) Dɛn ne “asɛmpa no ho nokware” no?
17 Yɛde anigye ne ahosɛpɛw som “Yehowa, nokware Nyankopɔn” no. (Dw. 31:5) Dɛn ne nokware? Ɛyɛ biribi ho nokwasɛm turodoo; ɛnyɛ bɔsrɛmka anaa nsusuwii bi kɛkɛ. Hebri kasa a wɔde kyerɛw Bible no kyerɛ “nokware” ase sɛ biribi a ɛwɔ hɔ, ɛyɛ pɛpɛɛpɛ, anaa biribi a yebetumi de yɛn ho ato so. Hela asɛmfua a wɔkyerɛ ase “nokware” no kyerɛ biribi a ɛwɔ hɔ anaa ɛteɛ anaa edi mũ.
18 Yehowa akora nokware no so abesi nnɛ, na daa yesua nokware no ho nsɛm pii. (2 Yoh. 1, 2) Ade rekye a ade resa nyinaa, ɔma nokware no hyerɛn ma yɛn. Mmebusɛm 4:18 ka sɛ: “Treneefo kwan te sɛ owia hann, ɛhyerɛn nkakrankakra kosi awia ketee.” Yesu bɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: “W’asɛm yɛ nokware.” (Yoh. 17:17) Bible mu na yehu “asɛmpa no ho nokware” no. Eyi gyina hɔ ma Kristofo nkyerɛkyerɛ nyinaa. (Gal. 2:14) Saa nkyerɛkyerɛ yi mu bi ne Yehowa din, ne tumidi, Yesu agyede afɔre no, owusɔre, ne Ahenni no. Satan afa akwan pii so sɛ ɔbɛka nokware no ahyɛ nanso Onyankopɔn amma kwan. Ɛnde, momma yɛnhwɛ kwan a Onyankopɔn afa so akora nokware no so.
YEHOWA AMMA WƆANKA NOKWARE NO ANHYƐ
19, 20. Hena ne Nimrod? Dɛn na na ɛrekɔ so wɔ ne bere so a egye gui?
19 Nsuyiri no akyi no, onipa biako a ɔsɔre tiaa Yehowa ne Nimrod. Enti na wɔwɔ kasabebu bi sɛ: “Te sɛ ɔbɔmmɔfo kɛse Nimrod a ɔsɔre tiaa Yehowa.” (Gen. 10:9) Nimrod sɔre tiaa Yehowa Nyankopɔn, enti yebetumi aka sɛ na ɔresom Satan. Na Nimrod te sɛ nkurɔfo a wɔsɔre tiaa Yesu no. Yesu kaa wɔn ho asɛm sɛ: “Mufi mo agya Ɔbonsam hɔ, na mopɛ sɛ moyɛ mo agya no apɛde. Ɔno . . . na wannyina nokware no mu.”—Yoh. 8:44.
20 Nkurow a na Nimrod di so no bi ne Babel ne nkurow a ɛwɔ Tigris ne Eufrate asubɔnten no ntam. (Gen. 10:10) Ebetumi aba sɛ ɔno na ɔma wofii ase sii Babel abantenten no wɔ afe 2269 A.Y.B. mu. Na Yehowa pɛ sɛ adesamma trɛw kɔ asase so baabiara, nanso wɔn a wɔresi abantenten no kae sɛ: “Hwɛ! Momma yɛnkyekye kurow kɛse na yɛnto abantenten a n’atifi bedu soro, na yennye din, na yɛammɔ anhwete asase nyinaa so.” Nanso “Yehowa yɛɛ asase nyinaa kasa basabasa,” na ɔbɔɔ wɔn hwetee maa wɔn nsusuwii yɛɛ kwa. (Gen. 11:1-4, 8, 9) Sɛ na Satan adwene ne sɛ ɔbɛma obiara asom no a, ɛnde ne nsa sii fam. Yehowa akora nokware som so abesi nnɛ, na daa nnipa sen yuu ba nokware som mu.
21, 22. (a) Dɛn nti na atoro som ntumi nkaa nokware som nhyɛe? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu?
21 Atoro som ntumi nkaa nokware som nhyɛe. Adɛn ntia? Efisɛ yɛn Kyerɛkyerɛfo Kunini, Yehowa, akora Bible so abesi nnɛ, wama adesamma ahu ne din, na wama nokware no ahyerɛn ama yɛn. (Yes. 30:20, 21) Sɛ yɛsom Onyankopɔn sɛnea ɔpɛ a yɛn ho sɛpɛw yɛn, nanso ehia sɛ yɛma yɛn ani da hɔ na yɛde yɛn ho nyinaa to Yehowa so, na yedi akwankyerɛ a ɔnam ne honhom kronkron so de ma yɛn so.
22 Adesua a edi hɔ no, yebehu nea ɛyɛe a atoro nkyerɛkyerɛ bi fii ase. Yebehu sɛ saa nkyerɛkyerɛ no nni nnyinaso biara wɔ Bible mu. Afei nso, yebehu sɛ Yehowa de nokware nkyerɛkyerɛ adom yɛn. Eyinom nyinaa yɛ Yehowa asomfo agyapade.